Ukuzamazama komhlaba: Imibhalo Yokuthengisa Enamandla kanye Nezethulo | Martech Zone
Ukuzamazama komhlaba: Imibhalo Yokuthengisa Enamandla kanye Nezethulo
NgoLwesine, Juni 12, 2014 NgoLwesine, Juni 12, 2014 Douglas Karr
Sithole ukuqashelwa okuthile namuhla lapho Martech Zone wabizwa ngegama insiza ephezulu yolwazi ngokuvunyelwa kokuthengisa amasu nobuchwepheshe obuvela ekuzamazameni komhlaba. Ngonyaka odlule, sibone isimanga esimangalisayo kulesi sikhala esithuthukisa ukusebenzisana kwezentengiso nokuthengisa kangcono kunangaphambili.
Isayithi elisincomile - ngemuva ngqo Forrester, Salesforce futhi LinkedIn - kungukuzamazama komhlaba. I-Seismic yakhe ipulatifomu yokuphathwa kokuqukethwe kwamabhizinisi edala ukuxhumana phakathi kwamadokhumenti akho kanye nemithombo yesikhathi sangempela yolwazi njenge-SharePoint ne-Salesforce, ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu oseqenjini lakho lokuthengisa unakho ngqo abakudingayo, lapho bekudinga khona.
Amathuluzi wokunika amandla wokuthengisa afana ne-Seismic angaba nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwakho kokuthengisa, ngezinzuzo ezilinganisekayo
Ummeleli Wokuthengisa onboarding - qeqesha ngokushesha ama-reps amasha bese uqala imisebenzi ephelele yokuthwala i-quota.
Ukusebenza kwesikhathi - umthengisi ojwayelekile usebenzisa kuphela amaphesenti angama-35 wesikhathi sabo ethengisa… manje sebengachitha isikhathi esiningi bethengisa.
Ukuqhubeka nemfundo - qinisekisa ukuthi abaphenduli bakho banolwazi ngemikhiqizo emisha nokuthumela imiyalezo ngomkhiqizo.
Ulwazi lwekhasimende - hlanganisa nesoftware yeCRM ukuhlinzeka abamele ukuqonda okubalulekile kunoma iyiphi i-akhawunti yekhasimende.
Ukusheshisa umjikelezo - nciphisa umjikelezo wokuthengisa, ongasuka kokuzenzakalela kokumaketha ukuya esikhathini sokuguqula izinkontileka.
Ukulethwa kokuqukethwe - I-lynchpin kunikwe amandla okuthengisa, ukwazi ukuletha izinto zokuthengisa ezilungile ngesikhathi esifanele kunoma iyiphi idivayisi ukuqinisekisa ukuthi okuhlangenwe nakho komuntu ngamunye kwenzeka ngendlela ephindaphindwayo.
Amabhizinisi abeke imali kumathuluzi okuvumela ukuthengisa nezinye izinsiza ukusheshisa umjikelezo wokuthengisa abone a Ukuthuthuka okungamaphesenti angama-51 emazingeni okuguqulwa komthofu, ngokusho kweqembu locwaningo i-Aberdeen. Mayelana Amaphesenti angama-54 abone ukwanda unyaka nonyaka kwizilinganiso zokuhlangana zabathengisi.
Tags: phila docUkuqeqeshwa Kwezentengisolokubonisaokuqukethwe kokuthengisaimibhalo yokuthengisaimibhalo yokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisaizethulo zokuthengisaomele ezokudayisaabasebenzi bokuthengisasalesforceukuzamazama komhlabaisabelo
Amasu Wokukhuthaza Ibhulogi Asuka Kongoti Abaphezulu Bokumaketha
Izindlela ezi-5 Amathebulethi Aguqula Ukuhlangenwe nakho Kokuthengisa